IQOO entry-level စမတ်ဖုန်း U5e သတ်မှတ်ချက် ပေါက်ကြား - Pandaily
Jun 02, 2022, 22:11ညနေ 2022/06/02 23:04:03 Pandaily
IQOO U5e, မော်ဒယ် နံပါတ် vivo V2197Aကြာသပတေး နေ့က China Telecom Terminal ထုတ်ကုန် စာကြည့်တိုက် တွင် ပြသခဲ့သည်။ စမတ်ဖုန်း မှာ RAM 6GB နဲ့ Storage 128GB ပါဝင်ပြီး Silver နဲ့ Black အရောင် နှစ်မျိုး ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်။
၀က္ဘ္ဆိုက္ မွာ ေဖာ္ျပထား ခ်က္အရ စက္ ပစၥည္း အသစ္ ဟာ အေလးခ်ိန္ ၁ ၉၃ ဂရမ္ ရွိၿပီး ၁ ၆၄ × ၇၅. ၈၄ × ၈ တိုင္းတာ ပါတယ္။ 25mm ကို ပလတ္စတစ္ အိမ္ နဲ႔ တည္ေဆာက္ ထားၿပီး 6.51-inch 1600 × 720 resolution screen ကို အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။
U5e မှာ 5000mAh Battery, 3.5mm headphone jack နဲ့ Type-C interface ပါဝင် မှာ ဖြစ်ပေမယ့် Memory Extension 1T အထိ ထောက်ပံ့ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေရွ႕ ကင္မရာ ကေတာ့ 8 megapixel ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ ကင္မရာ ကေတာ့ 13 megapixel +2megapixel ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:IQOO Neo6 ကို မူရင်း retro အနာဂတ် ဒီဇိုင်း ဖြင့် အိန္ဒိယ ဈေးကွက်တွင် စတင်မိတ်ဆက် ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် iQOO သည်၎င်း၏ U5 ကို ကုမ္ပဏီ ၏နောက်ဆုံး အဆင့် U-series အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ ဖုန္း ရဲ႕ ဘက္ထရီ ပိုင္းမွာ ပိုမို ႀကီးမား ၿပီး ကိုယ္ ထည္ ပိုင္း မွာလည္း ပိုမို ပါး လႊာ ၿပီး 2.5D Straight Edge Design နဲ႔ ေဘး လက္ေဗြ ရာ ေတြကို အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။
IQOO U5 (ဓာတ်ပုံ-iQOO)
IQOO U5 မွာ Qualcomm 695 processor နဲ႔ ၆. ၅၈ လက္မ water drop-type LCD screen ကို အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။ ဖုန်း မှာ 120Hz refresh rate နဲ့ 240Hz touch sampling rate ပါဝင်ပြီး 5000mAh battery ပါဝင်ပြီး 18W fast charging ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။
ကင္မရာ ပိုင္း မွာေတာ့ iQOO U5 ရဲ႕ ေက်ာ ဘက္ ကင္မရာ ကေတာ့ 50-megapixel main camera (F/1.8) နဲ႔ 2-megapixel macro dual camera ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ ကင္မရာ ကေတာ့ 8-megapixel ျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ vivo ၏ လွတ်လပ်သော အမှတ်တံဆိပ် iQOO သည်၎င်း၏ Neo6 ကို နိုင်ငံတကာ တွင် ပွဲထုတ် မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။